Hoco B10-7000 wood power bank Home | 24 Naryee
Hoco B10-7000 wood power bank
15000.00 Kyat Ks
ရိုးရှင်းသော၊ လှပသော၊ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လက်တွေ့ကျသော၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ခောတ်မှီစတိုင်ကျ ဒီဇိုင်းပုံစံလေးနဲ့ အားကိုအပြည့်အဝ ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်သော Hoco B10 7000mAh 2.1A Wood Pattern Portable Power Bank လေးဖြစ်ပါတယ်။
Mobile Devices များ ဖုန်းအားကုန်မှာပူစရာမလိုတော့ဘဲ အချိန်တိုအတွင်းလျင်မြန်စွာ ဘယ်နေရာကိုသွားသွား လွယ်လွယ်ကူကူဖြင့် ယူဆောင် အားဖြည့်သွင်းလို့ရပါသည်။ ပါဝါအား မည်မျှကျန်ရှိသည်ကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက်လည်း indicators ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ၊ အားသွင်းစနစ်နှင့် fast-charging စနစ်များတို့လည်း ပါဝင်သဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်မည့် ပါဝါဘန့်ခ်တစ်လုံး ဖြစ်ပါသည်။
Customer များအတွက် မှန်ကန်တိကျသော ရွေးချယ်မူနဲ့အတူ ၂၄နာရီ တွင် စိတ်ကြိုက် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ။
ဈေးနှုန်းလေးတွေ အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင် ဖုန်းလေးဆက်ပြီး စုံစမ်းဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်…
စာရင်းသွင်းပြီးသူ 98 ဖော်ပြချက်များ
အင်းစိန် (Insein), Yangon (ရန်ကုန်), Myanmar
9500.00 Kyat Ks
Hoco P3 Multifunctional Mobile Phone Holder
1. L = 1.0, weight: 100 g; 2. Compatible with Lightning interface; 3. Car, home, office can be used flexibly; 4. Two stalls design, charging, mobile phone stent flexible switching; 5. 360-degree rotating design, comes with card holder;6Comes with U...
24000.00 Kyat Ks
B12-13000 Khaki power bank
1. Capacity: 13000mAh; 2. Input: DC5V 2.0A MAX, output: USB1: DC5V 2.1A, USB2: DC5V 2.1A; 3. ABS+PC fire-resistant material,natural combination of aesthetic arc process and colors, simple appearance design, surface sprayed with environmental friendly...